Emeputa Ngwa & Ndị Na - emeputa - China Classic Case Factory
LXSHOW Akụkọ Laser
Ji achọ Lighting
Car Ụkwụ ute
Metal tube ịgbado ọkụ
site na nhazi na 20-05-14
Laser cladding bụ teknụzụ mgbanwe ọhụrụ nke elu ala. Ọ na - agbakwụnye ihe eji achọ ihe n’elu mkpụrụ ma jiri akwa ike nkwụ laser kpụ ọkụ n'ọnụ iji mepụta ya na akwa dị omimi n’elu ihe ahụ iji mejupụta ihe na - agbakwunye oyi akwa yana igwe ọla. ...
Laser ihicha elu mkpuchi na pretreatment tupu mkpuchi
aser nhicha ịgbado ọkụ ntụpọ na oyi akwa
Lingxiu laser ihichapụrụ ihe ndị a na-agwaghị agwa, ihe ndị na-adịghị mma na ihe ndị a na-ahụ maka ya na ọla ahụ, nke mere na ogo ịgbadoro na brazing dị elu, wee hụkwa welds ahụ mgbe ekpochara welding. Enwere ike ihicha akwa ịgbado ọkụ nke nchara na aluminom tupu ịgbanye weld. M ...
Laser ihicha mmanụ unyi (belụsọ agba)
Mwepụ nke ahịhịa Laser
Enwere ike ihicha ngwa ngwa, kpochapu ma zoo nke ọma iji wepu elu ajị anụ ahụ Enwere ike iji ya ogologo oge yana ụgwọ arụmọrụ dị ala; Ngwá ọrụ nwere ike ịrụ ọrụ na-akpaghị aka na ịrụ ọrụ dị mfe; Gburugburu ebe obibi prot ...
Laser ihicha rọba taya
Mgbe ihe ịma aka nke ihicha ihe eji akpụzi taya, Lingxiu laser enweelarịrị usoro zuru oke ma dị ngwa ngwa-site na aka aka gaa na sistem laser akpaka zuru oke. Hichaa ihe ndị dị mgbagwoju anya. Usoro nhicha laser akpaka nwere ike ihichaa ọtụtụ ihe ndị mejupụtara ọfụma n'ụzọ ziri ezi, ...
Carbon Fiber Cutting Machine , Eriri Cutting Machine 500w, Laser Fiber Ịcha Machine, Eriri laser Cutting Machine,